မွဲ႔တည္ေနရာမ်ားရဲ႕ေကာင္းက်ိဳးဆိုးျပစ္မ်ား - ေဗဒင္၀ါသနာအိုး
Posted on February 24, 2017 February 24, 2017 by Bay Din War Tanar Oh
မွဲ႔တည္ေနရာ ႏွင့္ အေဟာေတြပါ။
ေယာက်္ားတို႔၏ မွဲ႔ တည္ေနရာႏွင့္ အေဟာ….
( ၁ ) နဖူးျပင္တည့္တည့္တြင္ မွဲ႔ရွိလွ်င္ ေငြေၾကးႏွင့္ပတ္သက္၍ အစြပ္အစြဲခံရတတ္၏။ အပူေသာကမ်ားလိမ့္မည္။ မိမိတြင္ ရွိသည္ထက္ပို၍ လူအမ်ားက ခ်မ္းသာသည္ဟု ထင္ျမင္တတ္ျခင္းေၾကာင့္ ဒုကၡေတြ႔ရတတ္ပါသည္။
( ၂ ) ညာဘက္မ်က္ခံုးေမြးေပၚတြင္ရွိလွ်င္ ခ်မ္းသာတတ္ပါသည္။ ပစၥည္းဥစၥာ ျပည့္စံုလိမ့္မည္။ ေလာကီစည္းစိမ္အဝဝကို သံုးေဆာင္ခံစားရတတ္သည္။
( ၃ ) ဘယ္ဘက္မ်က္ခံုးေမြးေပၚတြင္ မွဲ႔ရွိ္လွ်င္ အရက္သမား၊ ၾကက္သမား၊ ေလာင္းကစားသမား ျဖစ္တတ္သည္။ ေလာင္းကစားမႈကို ဇနီးမယားထက္ပင္ ပိုမို၍ ခ်စ္ခ်င္စြဲလမ္းႏွစ္သက္ပါသည္။
( ၄ ) ႏွာေခါင္းတည့္တည့္ (ႏွာသီးထိပ္ဖ်ား)တြင္ မွဲ႔ရွိလွ်င္ စာေပ၊ ဇာတ္သဘင္၊
ေတးဂီတ အႏုပညာရပ္မ်ားျဖင့္ ထင္ရွား၍ ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကား တတ္ပါသည္။
( ၅ ) ညာဘက္မ်က္ခမ္းေအာက္တြင္ မွဲ႔ရွိလွ်င္ မ်က္ႏွာပြင့္လန္းတတ္သည္။ မ်က္ႏွာျမင္ ခ်စ္ခင္၍ အသံၾကား သနားေစ- ဟူေသာဆုေတာင္းျဖင့္ ျပည့္စံုသူျဖစ္သည္။ လူအမ်ား၏ခ်စ္ခင္ျခင္း ခံရတတ္သည္။
( ၆ ) ဘယ္ဘက္မ်က္ခမ္းေအာက္နားတြင္ မွဲ႔ရွိလွ်င္ လူမုန္းမ်ားတတ္သည္။ အလုပ္လုပ္ကိုင္ရာတြင္ အတိုက္အခံႏွင့္ ၾကံဳရတတ္သည္။ ငယ္စဥ္အခါက ဆင္းရဲဒုကၡအမ်ိဳးမ်ိဳး ၾကံဳေတြ႔ခဲ့ရလိမ့္မည္။ အခ်စ္ေရးတြင္ စြန္႔စားတတ္သည္။ တဇြတ္ထိုးလုပ္တတ္သည္။ ဇနီးမယားကို ခ်စ္ခင္သူျဖစ္မည္။ ဇနီးသည္၏ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈကို ခံရတတ္ပါသည္။
( ၇ ) ညာဘက္ပါးမို႔တြင္ စံပယ္တင္မွဲ႔ရွိလွ်င္ မိန္းကေလးမ်ား စိတ္ဝင္စားျခင္းကို ခံရတတ္သည္။ မ်က္ႏွာပြင့္လန္းတတ္ပါသည္။ ေလာကကို တရားသေဘာျဖင့္ ရႈျမင္တတ္ေသာသူ ျဖစ္သည္။ အသက္ႀကီးရင့္လာလွ်င္ ရေသ ရဟန္း ျပဳတတ္သည္။ အမ်ားအက်ိဳးေဆာင္သည့္ သာသနာျပဳပုဂၢိဳလ္ ျဖစ္တတ္ပါသည္။
( ၈ ) ဘယ္ဘက္ပါးေပၚတြင္ စံပယ္တင္မွဲ႔ရွိလွ်င္ မိန္းမေခ်ာမ်ား (သို႔မဟတု္) ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားေသာ မိန္းမႏွင့္ အိမ္ေထာင္က်တတ္ပါသည္။ မိန္းမတို႔၏ ခ်စ္ခင္စြဲျခင္းကို အထူးသျဖင့္ ခံယူရတတ္ပါသည္။
( ၉ ) ညာဘက္ပါးျပင္၌ ေအာက္ဘက္နားတြင္ မွဲ႔ရွိလွ်င္ ခ်မ္းသာလွ်င္လည္း ခဏတာမွ်သာ ျဖစ္သည္။ ဆင္းရျပင္ပန္းတတ္သည္။
( ၁၀ ) ဘယ္ဘက္ပါးျပင္ေအာက္တြင္ ထင္ရွားစြာ မွဲ႔ရွိလွ်င္ ခ်မ္းသာႀကီးပြားတတ္သည္။ ဘယ္အလုပ္မဆို ေအာင္ျမင္၍ နာမည္ေက်ာ္ၾကား တတ္ပါသည္။
ေဗဒင္ဝါသနာအိုး Page မွတင္ဆက္ပါသည္
( ၁၁ ) ေမးေစ့တည့္တည့္တြင္ မွဲ႔ရွိ္လွ်င္ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းျဖင့္ ႀကီးပြားခ်မ္းသာ တတ္ပါသည္။ သတင္းေကာင္းျဖင့္ ေက်ာ္ၾကားေအာင္ျမင္မည္။
( ၁၂ ) ေမးေစ့နားတဝိုက္တြင္ ထင္ရွားေသာမွဲ႔ရွိလွ်င္ ဒုကၡဆင္းရဲ အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ကို ၾကံဳေတြ႔ရတတ္ျပီး ေနာက္ဆံုးတြင္ ေအာင္ျမင္တတ္သည္။ ကမၻာေက်ာ္သည့္ပုဂၢိဳလ္ထူးမ်ားတြင္လည္း ပါရွိသည္။
( ၁၃ ) မ်က္ရည္စီးက်ရာ လမ္းေၾကာင့္တည့္တည့္ (ဝဲ,ယာ)တြင္ မွဲ႔ရွိလွ်င္ မယားဆံုးတတ္သည္။ (သို႔မဟုတ္) အိမ္ေထာင္ေရး ညံ႔တတ္သည္။ စီးပြားရွာရာတြင္ ပင္ပန္းတတ္ပါသည္။
( ၁၄ ) လည္ပင္းတြင္ မွဲ႔ရွိ္လွ်င္ ခ်မ္းသာႀကီးပြားတတ္သည္။ အလုပ္အကိုင္ အၾကံအစည္ ေအာင္ျမင္တတ္သည္။ ဆင္းရဲလွ်င္လည္း တခဏတာျဖစ္၍ မေမွ်ာ္လင့္ မထင္မွတ္ေသာ အေၾကာင္းတခုခုျဖင့္ ခ်မ္းသာတတ္ပါသည္။
( ၁၅ ) ဘယ္, ညာ လက္ေမာင္း (သို႔မဟုတ္) လက္ဖ်ံ ဘယ္,ညာတြင္ မွဲ႔ရွိလွ်င္ ဆင္းရဲသူျဖစ္ပါက လူလတ္တန္းစားဘဝျဖင့္ အဆင္ေျပတတ္သည္။ အလယ္အလတ္တန္း အဆင့္ျဖစ္လွ်င္ ေဇာတိကသူေဌးကဲ့သို႔ ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝေသာသူေဌး ျဖစ္တတ္ပါသည္။
( ၁၆ ) ရင္ဘတ္ ဘယ္ဘက္ႏွင့္ ညာဘက္တြင္ မွဲ႔တလံုးစီ ရွိ၍ ရင္ဘတ္အလယ္တည့္တည့္တြင္ မွဲ႔တလံုး၊ ခါးနားတြင္ မွဲ႔တလံုး၊ ပါရွိျခင္းကို မွဲ႔စလြယ္ဟု ေခၚဆိုသည္။ အသက္ရွည္၍ ဗဟုသုတ ဉာဏ္အေျမာ္အျမင္ ႀကီးမားေသာ ေရွးလူႀကီးမ်ား၊ ရေသ့ပညာရွိႀကီးမ်ား၏ အဆိုအမိန္႔အရ ေယာက်္ားတြင္ မွဲ႔စလြယ္ရွိျခင္းသည္ ယခင္ဘဝေဟာင္းက မင္းျဖစ္ခဲ့သူျဖစ္သည္ဟု အဆိုအမိန္႔ရွိၾက၏။ မွဲ႔စလြယ္ ပါရွိေသာသူသည္ ဆင္းရဲဒုကၡႏွင့္ မၾကံဳရဘဲ အဆင့္အတန္းျမင့္သည္ ့ဘဝမ်ိဳးႏွင့္ ေနႏို္ိင္ရလိမ့္မည္။ လူအမ်ား၏ ၾကည္ညိဳေလးစားျခင္းကို ခံ၇တတ္သည္။ ဇနီးမယားအေပၚတြင္ ၾသဇာေညာင္း တတ္ပါသည္။
( ၁၇ ) ဘယ္ဘက္ (သို႔မဟုတ္) ညာဘက္ ေပါင္တြင္ မွဲ႔ရွိလွ်င္ လ်င္ျမန္ဖ်တ္လတ္သူ ျဖစ္တတ္သည္။ လူမႈေရးကိစၥ အဝဝကို သိနားလည္ျပီး အကင္းပါးသူ ျဖစ္တတ္သည္။
( ၁၈ ) တင္ပါး၏ ဘယ္ဘက္ (သို႔မဟတု္) ညာဘက္တြင္ မွဲ႔ရွိလွ်င္ အရွက္အေၾကာက္ အလြန္ႀကီးတတ္ပါသည္။ စိတ္သေဘာထား ႏုတတ္သည္။ ေယာက်္ားျဖစ္ပါလ်က္ႏွင့္ တခါတရံတြင္ မိန္းမဆန္ေသာ အျပဳအမူအေနအထိုင္မ်ားကို ေတြ႔ရတတ္သည္။
( ၁၉ ) ေယာက်္ားတန္ဆာ ထိပ္ဖူးနားတြင္ မွဲ႔ရွိလွ်င္ မိန္းမတို႔၏ ခ်စ္ခင္စြဲလမ္း ႏွစ္သက္ျခင္းကို ခံစားရတတ္ပါသည္။ ေရွးဆရာႀကီးမ်ား၏ အဆိုအမိန္႔အရ မွဲ႔မ်ားေလ ပို၍ အစြမ္းထက္ေလဟု ဆို၏။ ထိပ္ဖူးနားတြင္ မွဲ႔ႏွစ္လံုးထက္ပိုလွ်င္ အိမ္ေထာင္ဆက္ မ်ားတတ္သည္။ တန္ဆာ၏အရင္းပိုင္းတြင္ မွဲ႔ပါရွိလွ်င္ မွဲ႔မပါသကဲ့သို႔ပင္ စြမ္းအား မရွိဟု မွတ္ယူရပါမည္။
( ၂၀ ) ေျခဖဝါးအလည္တည့္တည့္တြင္ မွဲ႔ရွိလွ်င္ တေနရာတည္းတြင္ အတည္တက်ေနႈမရဘဲ ေျခသလံုးအိမ္တိုင္ဘဝျဖင့္ သြားလာေနထိုင္ရကာ ဘဝဆံုးပါးပ်က္စီးတတ္ပါသည္။
( ၂၁ ) ဘယ္ (သို႔မဟုတ္) ညာ ေျခဖမိုးတြင္ မွဲ ့မ်ားစြာ ပါရွိလွ်င္ သူရဲေကာင္းျဖစ္တတ္သည္။ (သို႔မဟုတ္) လူဆိုး၊ ဓားျပ ျဖစ္တတ္ပါသည္။ တုတ္၊ ဓား၊ လွံ စသည့္ လက္နက္ကိရိယာမ်ားကို ေဆာင္ထားတတ္သည္။ တိုက္ခိုက္ေရးပညာမ်ားတြင္လည္း ဝါသနာပါ၍ ပညာရွင္ျဖစ္တတ္သည္။
( ၂၂ ) ရင္ညြန္႔တည့္တည့္တြင္ ထင္ရွားေသာ မွဲ႔ရွိလွ်င္ သူေတာ္ေကာင္း သူျမတ္ေလာင္း ျဖစ္တတ္သည္။ တရားဓမၼ ႏွလံုးသြင္းတတ္သည္။ ေလာကီ သမထစ်ာန္တန္ခိုးဘက္သို႔ လိုက္စားတတ္သည္။ သိဒၶိ မဟိဒၶိ တန္ခိုးမ်ားရ၍ ေပါက္ေျမာက္ႏိုင္သည္။
( ၂၃ ) ညာဘက္လက္တြင္ မွဲ႔ပါရွိလွ်င္ ေငြေၾကးကို အေၾကာင္းျပဳ၍ အမႈျဖစ္တတ္ပါသည္။ ကပ္ေစးႏွဲသူ၊ မိမိကိုယ္က်ိဳး တခုတည္းကိုသာ ၾကည့္ျမင္တတ္သူ ျဖစ္တတ္ပါသည္။
( ၂၄ ) လက္ဖဝါးျပင္၏ ဘယ္ ၫာ ႏွစ္ဖက္စလံုး၏ အလယ္တည့္တည့္တြင္ ထူးထူးျခားျခား မွဲ႔အစိမ္းတလံုး ပါရွိလွ်င္ လူအမ်ား၏ ၾကည္ညိဳေလးစားျခင္း ခံရေသာ ဘုန္းရွင္၊ ကံရွင္၊ ပါရမီရွင္ ျဖစ္တတ္ပါသည္။ ဝိဇၨာဓိုရ္၊ သိဒၶိရွင္၊ မဟိဒၶိရွင္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ပ႒ာန္းဆက္ရွိသူျဖစ္သည္။ ဝိဇၨာလမ္းသို႔ လိုက္စားလွ်င္ ဆရာသမားေကာင္းႏွင့္ ေတြ႔ျပီး သိဒၶိရတတ္ပါသည္။
မိန္းမတို႔၏ မွဲ႔ တည္ေနရာႏွင္႔ အေဟာ
( ၁ )နဖူးျပင္၏ မ်က္ခံုးအထက္နားတြင္ မွဲ႔မည္းတလံုးတည္းရွိလွ်င္ ဂုဏ္ဓနႏွင့္ေက်ာ္ေစာေသာ လင္ေယာက်္ားကို ရတတ္သည္။ အိမ္ေထာင္ဆက္ မ်ားတတ္သည္။ သားေယာက်္ားမ်ား ထြန္းကားသည့္မိခင္ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။
( ၂ ) ညာဘက္နားထင္ မ်က္ခံုး၏ အနီးအနားပတ္ဝန္းက်င္တြင္ မွဲ႔ရွိလွ်င္ ငယ္ရြယ္စဥ္က ဆင္းရဲ၍ ႀကီးေသာ ခ်မ္းသာတတ္ပါသည္။ အိုဇာတာ ကံေကာင္းမည္။ မိမိၾသဇာကို နာခံမည့္ လင္ေယာက်္ားအား ရတတ္သည္။ အလုပ္အကိုင္ မွန္သမွ်ကို ဦးစီးဦးေဆာင္ ျပဳလုပ္တတ္သည္။ သားေယာက်္ားေမြးျပီး အက်ိဳးေပးတတ္သည္။
( ၃ ) အထက္ႏွဳတ္ခမ္း (သို႔) ေအာက္ႏႈတ္ခမ္း အနီးတဝို္က္တြင္ မွဲ႔ရွိလွ်င္ မိမိကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးေသာ ေယာက်္ားမ်ား ေပါမ်ားတတ္သည္။ ေယာက်္ားမ်ား၏ ႏွစ္ႏွစ္ကာကာ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးျခင္းကို ခံရမည္။ မိမိကိုယ္တိုင္လည္း အခ်စ္ႏွင့္ပတ္သက္လွ်င္ အစြဲအလမ္းစိတ္ ႀကီးတတ္သည္။ အစားအေသာက္ေကာင္းမ်ားကို အထူးႀကိဳက္ႏွစ္သက္သူျဖစ္သည္။
( ၄ ) ဘယ္ဘက္ပါးျပင္မို႔တြင္ မွဲ႔ရွိလွ်င္ စိတ္ႏု၍ အညႇာလြယ္တတ္ပါသည္။ တဖက္သားေျပာလာသည့္စကားကိုမစဥ္းစားဘဲ အယံုလြယ္တတ္ပါသည္။ ေယာက်္ားမ်ား၏ စိတ္ဝင္စားျခင္း၊ အေရးေပျခင္းကို ခံရတတ္သည္။
( ၅.) ညာဘက္ပါးျပင္မို႔တြင္ စံပယ္တင္မွဲ႔ရွိလွ်င္ လူခ်စ္လူခင္မ်ားတတ္သည္။ စန္းအလြန္ပြင့္တတ္သည္။ လင္ေယာက်ာ္းအေပၚ သစၥာရွိတတ္သည္။ အလုပ္အကိုင္ အဆင္ေျပ၍ ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားမည္။ ကံေကာင္းသူ ျဖစ္တတ္ပါသည္။
( ၆ ) လည္ပင္းတြင္ မွဲ႔ရွိလွ်င္ ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝတတ္ပါသည္။
( ၇ ) ဘယ္ ညာ လက္ေမာင္း (သို႔) ဘယ္လက္ဖ်ံ ညာလက္ဖ်ံတြင္ မွဲ႔ရွိ္လွ်င္ ပင္ပင္ပန္းပန္း လုပ္ကိုင္စားေသာက္ျခင္း မျပဳရဘဲ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းႏွင့္ ေနထိုင္ရတတ္ပါသည္။
( ၈ ) ညာဘက္သားျမတ္ (သို႔) ဘယ္ဘက္သားျမတ္ေပၚတြင္ မွဲ႔တလံုးထက္ပိုျပီး မ်ားစြာရွိလွ်င္ ငယ္စဥ္က မိဘတို႔၏စြန္႔ပစ္ျခင္းကို ခံရတတ္သည္။ ပစၥည္းခ်မ္းသာေသာ္လည္း စိတ္မခ်မ္းသာ ျဖစ္ရတတ္သည္။ ေလာဘရမၼက္ ႀကီးတတ္သည္။ မုဆိုးမ ျဖစ္တတ္ပါသည္။ ကံဆိုးတတ္ပါသည္။
( ၉.) ရင္၏အလယ္ဗဟိုတည့္တည့္တြင္ မွဲ႔ရွိလွ်င္ ပစၥည္းဥစၥာ ျပည့္စံုတတ္ပါသည္။ မိမိအေပၚ အလိုလိုက္ အႀကိဳက္ေဆာင္မည့္ လင္ေယာက်္ားကို ရတတ္သည္။ သားေကာင္း သမီးေကာင္း ထြန္းကားတတ္သည္။
( ၁၀ ) မိန္းမေယာနိတြင္ ထင္ရွားစြာ မွဲ႔ရွိလွ်င္ ရမၼက္က်ဴးတတ္သည္။ လွ်ပ္ေပၚေလာ္လီတတ္သည္။ မာယာပရိယာယ္ မ်ားတတ္ပါသည္။ မိမိစိတ္ကို မထိန္းႏိုင္လွ်င္ ဘဝပ်က္တတ္ပါသည္။
( ၁၁ ) မွဲ႔စလြယ္ ပါရွိလွ်င္ ငယ္စဥ္က ဆင္းရဲေစကာမူ ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝလာတတ္သည္။ ကေတာ္မယား ျဖစ္တတ္ပါသည္။ လူသိမ်ားျပီး ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားေသာ လင္ေယာက်ာ္းကို ရတတ္ပါသည္။ မည္မွ်ဆိုးသြမ္းေသာ ေယာက်ာ္ား ျဖစ္ေစကာမူ မိမိ၏ၾသဇာကို နာခံမည့္လင္ေယာက်ာ္းႏွင့္ ေပါင္းဖက္ ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
မှဲ့တည်နေရာ နှင့် အဟောတွေပါ။
ယောကျ်ားတို့၏ မှဲ့ တည်နေရာနှင့် အဟော….
( ၁ ) နဖူးပြင်တည့်တည့်တွင် မှဲ့ရှိလျှင် ငွေကြေးနှင့်ပတ်သက်၍ အစွပ်အစွဲခံရတတ်၏။ အပူသောကများလိမ့်မည်။ မိမိတွင် ရှိသည်ထက်ပို၍ လူအများက ချမ်းသာသည်ဟု ထင်မြင်တတ်ခြင်းကြောင့် ဒုက္ခတွေ့ရတတ်ပါသည်။
( ၂ ) ညာဘက်မျက်ခုံးမွေးပေါ်တွင်ရှိလျှင် ချမ်းသာတတ်ပါသည်။ ပစ္စည်းဥစ္စာ ပြည့်စုံလိမ့်မည်။ လောကီစည်းစိမ်အဝဝကို သုံးဆောင်ခံစားရတတ်သည်။
( ၃ ) ဘယ်ဘက်မျက်ခုံးမွေးပေါ်တွင် မှဲ့ရှိ်လျှင် အရက်သမား၊ ကြက်သမား၊ လောင်းကစားသမား ဖြစ်တတ်သည်။ လောင်းကစားမှုကို ဇနီးမယားထက်ပင် ပိုမို၍ ချစ်ချင်စွဲလမ်းနှစ်သက်ပါသည်။
( ၄ ) နှာခေါင်းတည့်တည့် (နှာသီးထိပ်ဖျား)တွင် မှဲ့ရှိလျှင် စာပေ၊ ဇာတ်သဘင်၊
တေးဂီတ အနုပညာရပ်များဖြင့် ထင်ရှား၍ အောင်မြင်ကျော်ကြား တတ်ပါသည်။
( ၅ ) ညာဘက်မျက်ခမ်းအောက်တွင် မှဲ့ရှိလျှင် မျက်နှာပွင့်လန်းတတ်သည်။ မျက်နှာမြင် ချစ်ခင်၍ အသံကြား သနားစေ- ဟူသောဆုတောင်းဖြင့် ပြည့်စုံသူဖြစ်သည်။ လူအများ၏ချစ်ခင်ခြင်း ခံရတတ်သည်။
( ၆ ) ဘယ်ဘက်မျက်ခမ်းအောက်နားတွင် မှဲ့ရှိလျှင် လူမုန်းများတတ်သည်။ အလုပ်လုပ်ကိုင်ရာတွင် အတိုက်အခံနှင့် ကြုံရတတ်သည်။ ငယ်စဉ်အခါက ဆင်းရဲဒုက္ခအမျိုးမျိုး ကြုံတွေ့ခဲ့ရလိမ့်မည်။ အချစ်ရေးတွင် စွန့်စားတတ်သည်။ တဇွတ်ထိုးလုပ်တတ်သည်။ ဇနီးမယားကို ချစ်ခင်သူဖြစ်မည်။ ဇနီးသည်၏ သြဇာလွှမ်းမိုးမှုကို ခံရတတ်ပါသည်။
( ရ ) ညာဘက်ပါးမို့တွင် စံပယ်တင်မှဲ့ရှိလျှင် မိန်းကလေးများ စိတ်ဝင်စားခြင်းကို ခံရတတ်သည်။ မျက်နှာပွင့်လန်းတတ်ပါသည်။ လောကကို တရားသဘောဖြင့် ရှုမြင်တတ်သောသူ ဖြစ်သည်။ အသက်ကြီးရင့်လာလျှင် ရသေ ရဟန်း ပြုတတ်သည်။ အများအကျိုးဆောင်သည့် သာသနာပြုပုဂ္ဂိုလ် ဖြစ်တတ်ပါသည်။
( ၈ ) ဘယ်ဘက်ပါးပေါ်တွင် စံပယ်တင်မှဲ့ရှိလျှင် မိန်းမချောများ (သို့မဟတု်) ထင်ရှားကျော်ကြားသော မိန်းမနှင့် အိမ်ထောင်ကျတတ်ပါသည်။ မိန်းမတို့၏ ချစ်ခင်စွဲခြင်းကို အထူးသဖြင့် ခံယူရတတ်ပါသည်။
( ၉ ) ညာဘက်ပါးပြင်၌ အောက်ဘက်နားတွင် မှဲ့ရှိလျှင် ချမ်းသာလျှင်လည်း ခဏတာမျှသာ ဖြစ်သည်။ ဆင်းရပြင်ပန်းတတ်သည်။
( ၁၀ ) ဘယ်ဘက်ပါးပြင်အောက်တွင် ထင်ရှားစွာ မှဲ့ရှိလျှင် ချမ်းသာကြီးပွားတတ်သည်။ ဘယ်အလုပ်မဆို အောင်မြင်၍ နာမည်ကျော်ကြား တတ်ပါသည်။
ဗေဒင်ဝါသနာအိုး Page မှတင်ဆက်ပါသည်
( ၁၁ ) မေးစေ့တည့်တည့်တွင် မှဲ့ရှိ်လျှင် ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းဖြင့် ကြီးပွားချမ်းသာ တတ်ပါသည်။ သတင်းကောင်းဖြင့် ကျော်ကြားအောင်မြင်မည်။
( ၁၂ ) မေးစေ့နားတဝိုက်တွင် ထင်ရှားသောမှဲ့ရှိလျှင် ဒုက္ခဆင်းရဲ အမျိုးမျိုးတို့ကို ကြုံတွေ့ရတတ်ပြီး နောက်ဆုံးတွင် အောင်မြင်တတ်သည်။ ကမ္ဘာကျော်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်ထူးများတွင်လည်း ပါရှိသည်။
( ၁၃ ) မျက်ရည်စီးကျရာ လမ်းကြောင့်တည့်တည့် (ဝဲ,ယာ)တွင် မှဲ့ရှိလျှင် မယားဆုံးတတ်သည်။ (သို့မဟုတ်) အိမ်ထောင်ရေး ညံ့တတ်သည်။ စီးပွားရှာရာတွင် ပင်ပန်းတတ်ပါသည်။
( ၁၄ ) လည်ပင်းတွင် မှဲ့ရှိ်လျှင် ချမ်းသာကြီးပွားတတ်သည်။ အလုပ်အကိုင် အကြံအစည် အောင်မြင်တတ်သည်။ ဆင်းရဲလျှင်လည်း တခဏတာဖြစ်၍ မမျှော်လင့် မထင်မှတ်သော အကြောင်းတခုခုဖြင့် ချမ်းသာတတ်ပါသည်။
( ၁၅ ) ဘယ်, ညာ လက်မောင်း (သို့မဟုတ်) လက်ဖျံ ဘယ်,ညာတွင် မှဲ့ရှိလျှင် ဆင်းရဲသူဖြစ်ပါက လူလတ်တန်းစားဘဝဖြင့် အဆင်ပြေတတ်သည်။ အလယ်အလတ်တန်း အဆင့်ဖြစ်လျှင် ဇောတိကသူဌေးကဲ့သို့ ချမ်းသာကြွယ်ဝသောသူဌေး ဖြစ်တတ်ပါသည်။
( ၁၆ ) ရင်ဘတ် ဘယ်ဘက်နှင့် ညာဘက်တွင် မှဲ့တလုံးစီ ရှိ၍ ရင်ဘတ်အလယ်တည့်တည့်တွင် မှဲ့တလုံး၊ ခါးနားတွင် မှဲ့တလုံး၊ ပါရှိခြင်းကို မှဲ့စလွယ်ဟု ခေါ်ဆိုသည်။ အသက်ရှည်၍ ဗဟုသုတ ဉာဏ်အမြော်အမြင် ကြီးမားသော ရှေးလူကြီးများ၊ ရသေ့ပညာရှိကြီးများ၏ အဆိုအမိန့်အရ ယောကျ်ားတွင် မှဲ့စလွယ်ရှိခြင်းသည် ယခင်ဘဝဟောင်းက မင်းဖြစ်ခဲ့သူဖြစ်သည်ဟု အဆိုအမိန့်ရှိကြ၏။ မှဲ့စလွယ် ပါရှိသောသူသည် ဆင်းရဲဒုက္ခနှင့် မကြုံရဘဲ အဆင့်အတန်းမြင့်သည် ့ဘဝမျိုးနှင့် နေနို်ိင်ရလိမ့်မည်။ လူအများ၏ ကြည်ညိုလေးစားခြင်းကို ခံရတတ်သည်။ ဇနီးမယားအပေါ်တွင် သြဇာညောင်း တတ်ပါသည်။
( ၁ရ ) ဘယ်ဘက် (သို့မဟုတ်) ညာဘက် ပေါင်တွင် မှဲ့ရှိလျှင် လျင်မြန်ဖျတ်လတ်သူ ဖြစ်တတ်သည်။ လူမှုရေးကိစ္စ အဝဝကို သိနားလည်ပြီး အကင်းပါးသူ ဖြစ်တတ်သည်။
( ၁၈ ) တင်ပါး၏ ဘယ်ဘက် (သို့မဟတု်) ညာဘက်တွင် မှဲ့ရှိလျှင် အရှက်အကြောက် အလွန်ကြီးတတ်ပါသည်။ စိတ်သဘောထား နုတတ်သည်။ ယောကျ်ားဖြစ်ပါလျက်နှင့် တခါတရံတွင် မိန်းမဆန်သော အပြုအမူအနေအထိုင်များကို တွေ့ရတတ်သည်။
( ၁၉ ) ယောကျ်ားတန်ဆာ ထိပ်ဖူးနားတွင် မှဲ့ရှိလျှင် မိန်းမတို့၏ ချစ်ခင်စွဲလမ်း နှစ်သက်ခြင်းကို ခံစားရတတ်ပါသည်။ ရှေးဆရာကြီးများ၏ အဆိုအမိန့်အရ မှဲ့များလေ ပို၍ အစွမ်းထက်လေဟု ဆို၏။ ထိပ်ဖူးနားတွင် မှဲ့နှစ်လုံးထက်ပိုလျှင် အိမ်ထောင်ဆက် များတတ်သည်။ တန်ဆာ၏အရင်းပိုင်းတွင် မှဲ့ပါရှိလျှင် မှဲ့မပါသကဲ့သို့ပင် စွမ်းအား မရှိဟု မှတ်ယူရပါမည်။
( ၂၀ ) ခြေဖဝါးအလည်တည့်တည့်တွင် မှဲ့ရှိလျှင် တနေရာတည်းတွင် အတည်တကျနှေုမရဘဲ ခြေသလုံးအိမ်တိုင်ဘဝဖြင့် သွားလာနေထိုင်ရကာ ဘဝဆုံးပါးပျက်စီးတတ်ပါသည်။
( ၂၁ ) ဘယ် (သို့မဟုတ်) ညာ ခြေဖမိုးတွင် မှဲ ့များစွာ ပါရှိလျှင် သူရဲကောင်းဖြစ်တတ်သည်။ (သို့မဟုတ်) လူဆိုး၊ ဓားပြ ဖြစ်တတ်ပါသည်။ တုတ်၊ ဓား၊ လှံ စသည့် လက်နက်ကိရိယာများကို ဆောင်ထားတတ်သည်။ တိုက်ခိုက်ရေးပညာများတွင်လည်း ဝါသနာပါ၍ ပညာရှင်ဖြစ်တတ်သည်။
( ၂၂ ) ရင်ညွန့်တည့်တည့်တွင် ထင်ရှားသော မှဲ့ရှိလျှင် သူတော်ကောင်း သူမြတ်လောင်း ဖြစ်တတ်သည်။ တရားဓမ္မ နှလုံးသွင်းတတ်သည်။ လောကီ သမထစျာန်တန်ခိုးဘက်သို့ လိုက်စားတတ်သည်။ သိဒ္ဓိ မဟိဒ္ဓိ တန်ခိုးများရ၍ ပေါက်မြောက်နိုင်သည်။
( ၂၃ ) ညာဘက်လက်တွင် မှဲ့ပါရှိလျှင် ငွေကြေးကို အကြောင်းပြု၍ အမှုဖြစ်တတ်ပါသည်။ ကပ်စေးနှဲသူ၊ မိမိကိုယ်ကျိုး တခုတည်းကိုသာ ကြည့်မြင်တတ်သူ ဖြစ်တတ်ပါသည်။
( ၂၄ ) လက်ဖဝါးပြင်၏ ဘယ် ညာ နှစ်ဖက်စလုံး၏ အလယ်တည့်တည့်တွင် ထူးထူးခြားခြား မှဲ့အစိမ်းတလုံး ပါရှိလျှင် လူအများ၏ ကြည်ညိုလေးစားခြင်း ခံရသော ဘုန်းရှင်၊ ကံရှင်၊ ပါရမီရှင် ဖြစ်တတ်ပါသည်။ ဝိဇ္ဇာဓိုရ်၊ သိဒ္ဓိရှင်၊ မဟိဒ္ဓိရှင် ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် ပဋ္ဌာန်းဆက်ရှိသူဖြစ်သည်။ ဝိဇ္ဇာလမ်းသို့ လိုက်စားလျှင် ဆရာသမားကောင်းနှင့် တွေ့ပြီး သိဒ္ဓိရတတ်ပါသည်။
မိန်းမတို့၏ မှဲ့ တည်နေရာနှင့် အဟော
( ၁ )နဖူးပြင်၏ မျက်ခုံးအထက်နားတွင် မှဲ့မည်းတလုံးတည်းရှိလျှင် ဂုဏ်ဓနနှင့်ကျော်စောသော လင်ယောကျ်ားကို ရတတ်သည်။ အိမ်ထောင်ဆက် များတတ်သည်။ သားယောကျ်ားများ ထွန်းကားသည့်မိခင် ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။
( ၂ ) ညာဘက်နားထင် မျက်ခုံး၏ အနီးအနားပတ်ဝန်းကျင်တွင် မှဲ့ရှိလျှင် ငယ်ရွယ်စဉ်က ဆင်းရဲ၍ ကြီးသော ချမ်းသာတတ်ပါသည်။ အိုဇာတာ ကံကောင်းမည်။ မိမိသြဇာကို နာခံမည့် လင်ယောကျ်ားအား ရတတ်သည်။ အလုပ်အကိုင် မှန်သမျှကို ဦးစီးဦးဆောင် ပြုလုပ်တတ်သည်။ သားယောကျ်ားမွေးပြီး အကျိုးပေးတတ်သည်။
( ၃ ) အထက်နှုတ်ခမ်း (သို့) အောက်နှုတ်ခမ်း အနီးတဝို်က်တွင် မှဲ့ရှိလျှင် မိမိကို ချစ်မြတ်နိုးသော ယောကျ်ားများ ပေါများတတ်သည်။ ယောကျ်ားများ၏ နှစ်နှစ်ကာကာ ချစ်မြတ်နိုးခြင်းကို ခံရမည်။ မိမိကိုယ်တိုင်လည်း အချစ်နှင့်ပတ်သက်လျှင် အစွဲအလမ်းစိတ် ကြီးတတ်သည်။ အစားအသောက်ကောင်းများကို အထူးကြိုက်နှစ်သက်သူဖြစ်သည်။
( ၄ ) ဘယ်ဘက်ပါးပြင်မို့တွင် မှဲ့ရှိလျှင် စိတ်နု၍ အညှာလွယ်တတ်ပါသည်။ တဖက်သားပြောလာသည့်စကားကိုမစဉ်းစားဘဲ အယုံလွယ်တတ်ပါသည်။ ယောကျ်ားများ၏ စိတ်ဝင်စားခြင်း၊ အရေးပေခြင်းကို ခံရတတ်သည်။
( ၅.) ညာဘက်ပါးပြင်မို့တွင် စံပယ်တင်မှဲ့ရှိလျှင် လူချစ်လူခင်များတတ်သည်။ စန်းအလွန်ပွင့်တတ်သည်။ လင်ယောကျာ်းအပေါ် သစ္စာရှိတတ်သည်။ အလုပ်အကိုင် အဆင်ပြေ၍ အောင်မြင်ကျော်ကြားမည်။ ကံကောင်းသူ ဖြစ်တတ်ပါသည်။
( ၆ ) လည်ပင်းတွင် မှဲ့ရှိလျှင် ချမ်းသာကြွယ်ဝတတ်ပါသည်။
( ရ ) ဘယ် ညာ လက်မောင်း (သို့) ဘယ်လက်ဖျံ ညာလက်ဖျံတွင် မှဲ့ရှိ်လျှင် ပင်ပင်ပန်းပန်း လုပ်ကိုင်စားသောက်ခြင်း မပြုရဘဲ အေးအေးချမ်းချမ်းနှင့် နေထိုင်ရတတ်ပါသည်။
( ၈ ) ညာဘက်သားမြတ် (သို့) ဘယ်ဘက်သားမြတ်ပေါ်တွင် မှဲ့တလုံးထက်ပိုပြီး များစွာရှိလျှင် ငယ်စဉ်က မိဘတို့၏စွန့်ပစ်ခြင်းကို ခံရတတ်သည်။ ပစ္စည်းချမ်းသာသော်လည်း စိတ်မချမ်းသာ ဖြစ်ရတတ်သည်။ လောဘရမ္မက် ကြီးတတ်သည်။ မုဆိုးမ ဖြစ်တတ်ပါသည်။ ကံဆိုးတတ်ပါသည်။
( ၉.) ရင်၏အလယ်ဗဟိုတည့်တည့်တွင် မှဲ့ရှိလျှင် ပစ္စည်းဥစ္စာ ပြည့်စုံတတ်ပါသည်။ မိမိအပေါ် အလိုလိုက် အကြိုက်ဆောင်မည့် လင်ယောကျ်ားကို ရတတ်သည်။ သားကောင်း သမီးကောင်း ထွန်းကားတတ်သည်။
( ၁၀ ) မိန်းမယောနိတွင် ထင်ရှားစွာ မှဲ့ရှိလျှင် ရမ္မက်ကျူးတတ်သည်။ လျှပ်ပေါ်လော်လီတတ်သည်။ မာယာပရိယာယ် များတတ်ပါသည်။ မိမိစိတ်ကို မထိန်းနိုင်လျှင် ဘဝပျက်တတ်ပါသည်။
( ၁၁ ) မှဲ့စလွယ် ပါရှိလျှင် ငယ်စဉ်က ဆင်းရဲစေကာမူ ချမ်းသာကြွယ်ဝလာတတ်သည်။ ကတော်မယား ဖြစ်တတ်ပါသည်။ လူသိများပြီး ထင်ရှားကျော်ကြားသော လင်ယောကျာ်းကို ရတတ်ပါသည်။ မည်မျှဆိုးသွမ်းသော ယောကျာ်ား ဖြစ်စေကာမူ မိမိ၏သြဇာကို နာခံမည့်လင်ယောကျာ်းနှင့် ပေါင်းဖက် နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
မှဲ့တညျနရော နှငျ့ အဟောတှပေါ။
ယောကြျားတို့၏ မှဲ့ တညျနရောနှငျ့ အဟော….
( ၁ ) နဖူးပွငျတညျ့တညျ့တှငျ မှဲ့ရှိလြှငျ ငှကွေေးနှငျ့ပတျသကျ၍ အစှပျအစှဲခံရတတျ၏။ အပူသောကမြားလိမျ့မညျ။ မိမိတှငျ ရှိသညျထကျပို၍ လူအမြားက ခမြျးသာသညျဟု ထငျမွငျတတျခွငျးကွောငျ့ ဒုက်ခတှေ့ရတတျပါသညျ။
( ၂ ) ညာဘကျမကြျခုံးမှေးပေါျတှငျရှိလြှငျ ခမြျးသာတတျပါသညျ။ ပစ်စညျးဥစ်စာ ပွညျ့စုံလိမျ့မညျ။ လောကီစညျးစိမျအဝဝကို သုံးဆောငျခံစားရတတျသညျ။
( ၃ ) ဘယျဘကျမကြျခုံးမှေးပေါျတှငျ မှဲ့ရှိျလြှငျ အရကျသမား၊ ကွကျသမား၊ လောငျးကစားသမား ဖွစျတတျသညျ။ လောငျးကစားမှုကို ဇနီးမယားထကျပငျ ပိုမို၍ ခစြျခငြျစှဲလမျးနှစျသကျပါသညျ။
( ၄ ) နှာခေါငျးတညျ့တညျ့ (နှာသီးထိပျဖြား)တှငျ မှဲ့ရှိလြှငျ စာပေ၊ ဇာတျသဘငျ၊
တေးဂီတ အနုပညာရပျမြားဖွငျ့ ထငျရှား၍ အောငျမွငျကြောျကွား တတျပါသညျ။
( ၅ ) ညာဘကျမကြျခမျးအောကျတှငျ မှဲ့ရှိလြှငျ မကြျနှာပှငျ့လနျးတတျသညျ။ မကြျနှာမွငျ ခစြျခငျ၍ အသံကွား သနားစေ- ဟူသောဆုတောငျးဖွငျ့ ပွညျ့စုံသူဖွစျသညျ။ လူအမြား၏ခစြျခငျခွငျး ခံရတတျသညျ။
( ၆ ) ဘယျဘကျမကြျခမျးအောကျနားတှငျ မှဲ့ရှိလြှငျ လူမုနျးမြားတတျသညျ။ အလုပျလုပျကိုငျရာတှငျ အတိုကျအခံနှငျ့ ကွုံရတတျသညျ။ ငယျစဉျအခါက ဆငျးရဲဒုက်ခအမြိုးမြိုး ကွုံတှေ့ခဲ့ရလိမျ့မညျ။ အခစြျရေးတှငျ စှနျ့စားတတျသညျ။ တဇှတျထိုးလုပျတတျသညျ။ ဇနီးမယားကို ခစြျခငျသူဖွစျမညျ။ ဇနီးသညျ၏ သွဇာလှှမျးမိုးမှုကို ခံရတတျပါသညျ။
( ရ ) ညာဘကျပါးမို့တှငျ စံပယျတငျမှဲ့ရှိလြှငျ မိနျးကလေးမြား စိတျဝငျစားခွငျးကို ခံရတတျသညျ။ မကြျနှာပှငျ့လနျးတတျပါသညျ။ လောကကို တရားသဘောဖွငျ့ ရှုမွငျတတျသောသူ ဖွစျသညျ။ အသကျကွီးရငျ့လာလြှငျ ရသေ ရဟနျး ပွုတတျသညျ။ အမြားအကြိုးဆောငျသညျ့ သာသနာပွုပုဂ်ဂိုလျ ဖွစျတတျပါသညျ။
( ၈ ) ဘယျဘကျပါးပေါျတှငျ စံပယျတငျမှဲ့ရှိလြှငျ မိနျးမခြောမြား (သို့မဟတုျ) ထငျရှားကြောျကွားသော မိနျးမနှငျ့ အိမျထောငျကတြတျပါသညျ။ မိနျးမတို့၏ ခစြျခငျစှဲခွငျးကို အထူးသဖွငျ့ ခံယူရတတျပါသညျ။
( ၉ ) ညာဘကျပါးပွငျ၌ အောကျဘကျနားတှငျ မှဲ့ရှိလြှငျ ခမြျးသာလြှငျလညျး ခဏတာမြှသာ ဖွစျသညျ။ ဆငျးရပွငျပနျးတတျသညျ။
( ၁၀ ) ဘယျဘကျပါးပွငျအောကျတှငျ ထငျရှားစှာ မှဲ့ရှိလြှငျ ခမြျးသာကွီးပှားတတျသညျ။ ဘယျအလုပျမဆို အောငျမွငျ၍ နာမညျကြောျကွား တတျပါသညျ။
ဗဒေငျဝါသနာအိုး Page မှတငျဆကျပါသညျ
( ၁၁ ) မေးစေ့တညျ့တညျ့တှငျ မှဲ့ရှိျလြှငျ ကိုယျပိုငျလုပျငနျးဖွငျ့ ကွီးပှားခမြျးသာ တတျပါသညျ။ သတငျးကောငျးဖွငျ့ ကြောျကွားအောငျမွငျမညျ။
( ၁၂ ) မေးစေ့နားတဝိုကျတှငျ ထငျရှားသောမှဲ့ရှိလြှငျ ဒုက်ခဆငျးရဲ အမြိုးမြိုးတို့ကို ကွုံတှေ့ရတတျပွီး နောကျဆုံးတှငျ အောငျမွငျတတျသညျ။ ကမ်ဘာကြောျသညျ့ပုဂ်ဂိုလျထူးမြားတှငျလညျး ပါရှိသညျ။
( ၁၃ ) မကြျရညျစီးကရြာ လမျးကွောငျ့တညျ့တညျ့ (ဝဲ,ယာ)တှငျ မှဲ့ရှိလြှငျ မယားဆုံးတတျသညျ။ (သို့မဟုတျ) အိမျထောငျရေး ညံ့တတျသညျ။ စီးပှားရှာရာတှငျ ပငျပနျးတတျပါသညျ။
( ၁၄ ) လညျပငျးတှငျ မှဲ့ရှိျလြှငျ ခမြျးသာကွီးပှားတတျသညျ။ အလုပျအကိုငျ အကွံအစညျ အောငျမွငျတတျသညျ။ ဆငျးရဲလြှငျလညျး တခဏတာဖွစျ၍ မမြှောျလငျ့ မထငျမှတျသော အကွောငျးတခုခုဖွငျ့ ခမြျးသာတတျပါသညျ။
( ၁၅ ) ဘယျ, ညာ လကျမောငျး (သို့မဟုတျ) လကျဖြံ ဘယျ,ညာတှငျ မှဲ့ရှိလြှငျ ဆငျးရဲသူဖွစျပါက လူလတျတနျးစားဘဝဖွငျ့ အဆငျပွတေတျသညျ။ အလယျအလတျတနျး အဆငျ့ဖွစျလြှငျ ဇောတိကသူဌေးကဲ့သို့ ခမြျးသာကွှယျဝသောသူဌေး ဖွစျတတျပါသညျ။
( ၁၆ ) ရငျဘတျ ဘယျဘကျနှငျ့ ညာဘကျတှငျ မှဲ့တလုံးစီ ရှိ၍ ရငျဘတျအလယျတညျ့တညျ့တှငျ မှဲ့တလုံး၊ ခါးနားတှငျ မှဲ့တလုံး၊ ပါရှိခွငျးကို မှဲ့စလှယျဟု ခေါျဆိုသညျ။ အသကျရှညျ၍ ဗဟုသုတ ဉာဏျအမွောျအမွငျ ကွီးမားသော ရှေးလူကွီးမြား၊ ရသေ့ပညာရှိကွီးမြား၏ အဆိုအမိနျ့အရ ယောကြျားတှငျ မှဲ့စလှယျရှိခွငျးသညျ ယခငျဘဝဟောငျးက မငျးဖွစျခဲ့သူဖွစျသညျဟု အဆိုအမိနျ့ရှိကွ၏။ မှဲ့စလှယျ ပါရှိသောသူသညျ ဆငျးရဲဒုက်ခနှငျ့ မကွုံရဘဲ အဆငျ့အတနျးမွငျ့သညျ ့ဘဝမြိုးနှငျ့ နနေိုျိငျရလိမျ့မညျ။ လူအမြား၏ ကွညျညိုလေးစားခွငျးကို ခံရတတျသညျ။ ဇနီးမယားအပေါျတှငျ သွဇာညောငျး တတျပါသညျ။
( ၁ရ ) ဘယျဘကျ (သို့မဟုတျ) ညာဘကျ ပေါငျတှငျ မှဲ့ရှိလြှငျ လငြျမွနျဖတြျလတျသူ ဖွစျတတျသညျ။ လူမှုရေးကိစ်စ အဝဝကို သိနားလညျပွီး အကငျးပါးသူ ဖွစျတတျသညျ။
( ၁၈ ) တငျပါး၏ ဘယျဘကျ (သို့မဟတုျ) ညာဘကျတှငျ မှဲ့ရှိလြှငျ အရှကျအကွောကျ အလှနျကွီးတတျပါသညျ။ စိတျသဘောထား နုတတျသညျ။ ယောကြျားဖွစျပါလကြျနှငျ့ တခါတရံတှငျ မိနျးမဆနျသော အပွုအမူအနအေထိုငျမြားကို တှေ့ရတတျသညျ။
( ၁၉ ) ယောကြျားတနျဆာ ထိပျဖူးနားတှငျ မှဲ့ရှိလြှငျ မိနျးမတို့၏ ခစြျခငျစှဲလမျး နှစျသကျခွငျးကို ခံစားရတတျပါသညျ။ ရှေးဆရာကွီးမြား၏ အဆိုအမိနျ့အရ မှဲ့မြားလေ ပို၍ အစှမျးထကျလဟေု ဆို၏။ ထိပျဖူးနားတှငျ မှဲ့နှစျလုံးထကျပိုလြှငျ အိမျထောငျဆကျ မြားတတျသညျ။ တနျဆာ၏အရငျးပိုငျးတှငျ မှဲ့ပါရှိလြှငျ မှဲ့မပါသကဲ့သို့ပငျ စှမျးအား မရှိဟု မှတျယူရပါမညျ။
( ၂၀ ) ခွဖေဝါးအလညျတညျ့တညျ့တှငျ မှဲ့ရှိလြှငျ တနရောတညျးတှငျ အတညျတကနြှေုမရဘဲ ခွသေလုံးအိမျတိုငျဘဝဖွငျ့ သှားလာနထေိုငျရကာ ဘဝဆုံးပါးပကြျစီးတတျပါသညျ။
( ၂၁ ) ဘယျ (သို့မဟုတျ) ညာ ခွဖေမိုးတှငျ မှဲ ့မြားစှာ ပါရှိလြှငျ သူရဲကောငျးဖွစျတတျသညျ။ (သို့မဟုတျ) လူဆိုး၊ ဓားပွ ဖွစျတတျပါသညျ။ တုတျ၊ ဓား၊ လှံ စသညျ့ လကျနကျကိရိယာမြားကို ဆောငျထားတတျသညျ။ တိုကျခိုကျရေးပညာမြားတှငျလညျး ဝါသနာပါ၍ ပညာရှငျဖွစျတတျသညျ။
( ၂၂ ) ရငျညှနျ့တညျ့တညျ့တှငျ ထငျရှားသော မှဲ့ရှိလြှငျ သူတောျကောငျး သူမွတျလောငျး ဖွစျတတျသညျ။ တရားဓမ်မ နှလုံးသှငျးတတျသညျ။ လောကီ သမထစြာနျတနျခိုးဘကျသို့ လိုကျစားတတျသညျ။ သိဒ်ဓိ မဟိဒ်ဓိ တနျခိုးမြားရ၍ ပေါကျမွောကျနိုငျသညျ။
( ၂၃ ) ညာဘကျလကျတှငျ မှဲ့ပါရှိလြှငျ ငှကွေေးကို အကွောငျးပွု၍ အမှုဖွစျတတျပါသညျ။ ကပျစေးနှဲသူ၊ မိမိကိုယျကြိုး တခုတညျးကိုသာ ကွညျ့မွငျတတျသူ ဖွစျတတျပါသညျ။
( ၂၄ ) လကျဖဝါးပွငျ၏ ဘယျ ညာ နှစျဖကျစလုံး၏ အလယျတညျ့တညျ့တှငျ ထူးထူးခွားခွား မှဲ့အစိမျးတလုံး ပါရှိလြှငျ လူအမြား၏ ကွညျညိုလေးစားခွငျး ခံရသော ဘုနျးရှငျ၊ ကံရှငျ၊ ပါရမီရှငျ ဖွစျတတျပါသညျ။ ဝိဇ်ဇာဓိုရျ၊ သိဒ်ဓိရှငျ၊ မဟိဒ်ဓိရှငျ ပုဂ်ဂိုလျမြားနှငျ့ ပဋ်ဌာနျးဆကျရှိသူဖွစျသညျ။ ဝိဇ်ဇာလမျးသို့ လိုကျစားလြှငျ ဆရာသမားကောငျးနှငျ့ တှေ့ပွီး သိဒ်ဓိရတတျပါသညျ။
မိနျးမတို့၏ မှဲ့ တညျနရောနှငျ့ အဟော
( ၁ )နဖူးပွငျ၏ မကြျခုံးအထကျနားတှငျ မှဲ့မညျးတလုံးတညျးရှိလြှငျ ဂုဏျဓနနှငျ့ကြောျစောသော လငျယောကြျားကို ရတတျသညျ။ အိမျထောငျဆကျ မြားတတျသညျ။ သားယောကြျားမြား ထှနျးကားသညျ့မိခငျ ဖွစျပါလိမျ့မညျ။
( ၂ ) ညာဘကျနားထငျ မကြျခုံး၏ အနီးအနားပတျဝနျးကငြျတှငျ မှဲ့ရှိလြှငျ ငယျရှယျစဉျက ဆငျးရဲ၍ ကွီးသော ခမြျးသာတတျပါသညျ။ အိုဇာတာ ကံကောငျးမညျ။ မိမိသွဇာကို နာခံမညျ့ လငျယောကြျားအား ရတတျသညျ။ အလုပျအကိုငျ မှနျသမြှကို ဦးစီးဦးဆောငျ ပွုလုပျတတျသညျ။ သားယောကြျားမှေးပွီး အကြိုးပေးတတျသညျ။
( ၃ ) အထကျနှုတျခမျး (သို့) အောကျနှုတျခမျး အနီးတဝိုျကျတှငျ မှဲ့ရှိလြှငျ မိမိကို ခစြျမွတျနိုးသော ယောကြျားမြား ပေါမြားတတျသညျ။ ယောကြျားမြား၏ နှစျနှစျကာကာ ခစြျမွတျနိုးခွငျးကို ခံရမညျ။ မိမိကိုယျတိုငျလညျး အခစြျနှငျ့ပတျသကျလြှငျ အစှဲအလမျးစိတျ ကွီးတတျသညျ။ အစားအသောကျကောငျးမြားကို အထူးကွိုကျနှစျသကျသူဖွစျသညျ။
( ၄ ) ဘယျဘကျပါးပွငျမို့တှငျ မှဲ့ရှိလြှငျ စိတျနု၍ အညှာလှယျတတျပါသညျ။ တဖကျသားပွောလာသညျ့စကားကိုမစဉျးစားဘဲ အယုံလှယျတတျပါသညျ။ ယောကြျားမြား၏ စိတျဝငျစားခွငျး၊ အရေးပခွေငျးကို ခံရတတျသညျ။
( ၅.) ညာဘကျပါးပွငျမို့တှငျ စံပယျတငျမှဲ့ရှိလြှငျ လူခစြျလူခငျမြားတတျသညျ။ စနျးအလှနျပှငျ့တတျသညျ။ လငျယောကြာျးအပေါျ သစ်စာရှိတတျသညျ။ အလုပျအကိုငျ အဆငျပွေ၍ အောငျမွငျကြောျကွားမညျ။ ကံကောငျးသူ ဖွစျတတျပါသညျ။
( ၆ ) လညျပငျးတှငျ မှဲ့ရှိလြှငျ ခမြျးသာကွှယျဝတတျပါသညျ။
( ရ ) ဘယျ ညာ လကျမောငျး (သို့) ဘယျလကျဖြံ ညာလကျဖြံတှငျ မှဲ့ရှိျလြှငျ ပငျပငျပနျးပနျး လုပျကိုငျစားသောကျခွငျး မပွုရဘဲ အေးအေးခမြျးခမြျးနှငျ့ နထေိုငျရတတျပါသညျ။
( ၈ ) ညာဘကျသားမွတျ (သို့) ဘယျဘကျသားမွတျပေါျတှငျ မှဲ့တလုံးထကျပိုပွီး မြားစှာရှိလြှငျ ငယျစဉျက မိဘတို့၏စှနျ့ပစျခွငျးကို ခံရတတျသညျ။ ပစ်စညျးခမြျးသာသောျလညျး စိတျမခမြျးသာ ဖွစျရတတျသညျ။ လောဘရမ်မကျ ကွီးတတျသညျ။ မုဆိုးမ ဖွစျတတျပါသညျ။ ကံဆိုးတတျပါသညျ။
( ၉.) ရငျ၏အလယျဗဟိုတညျ့တညျ့တှငျ မှဲ့ရှိလြှငျ ပစ်စညျးဥစ်စာ ပွညျ့စုံတတျပါသညျ။ မိမိအပေါျ အလိုလိုကျ အကွိုကျဆောငျမညျ့ လငျယောကြျားကို ရတတျသညျ။ သားကောငျး သမီးကောငျး ထှနျးကားတတျသညျ။
( ၁၀ ) မိနျးမယောနိတှငျ ထငျရှားစှာ မှဲ့ရှိလြှငျ ရမ်မကျကြူးတတျသညျ။ လြှပျပေါျလောျလီတတျသညျ။ မာယာပရိယာယျ မြားတတျပါသညျ။ မိမိစိတျကို မထိနျးနိုငျလြှငျ ဘဝပကြျတတျပါသညျ။
( ၁၁ ) မှဲ့စလှယျ ပါရှိလြှငျ ငယျစဉျက ဆငျးရဲစကောမူ ခမြျးသာကွှယျဝလာတတျသညျ။ ကတောျမယား ဖွစျတတျပါသညျ။ လူသိမြားပွီး ထငျရှားကြောျကွားသော လငျယောကြာျးကို ရတတျပါသညျ။ မညျမြှဆိုးသှမျးသော ယောကြာျား ဖွစျစကောမူ မိမိ၏သွဇာကို နာခံမညျ့လငျယောကြာျးနှငျ့ ပေါငျးဖကျ နိုငျမညျဖွစျသညျ။
Previous PostPrevious (2017) မွာအခ်စ္နဲ႔ဘယ္လိုဆံုေတြ႕မလဲ ဆိုတာ ( ရာသီခြင္အလိုက္ )
Next PostNext နဖူးကေျပာေသာသင့္အေၾကာင္း
ဆရာမင္​းသူရ ေဟာေျပာေပးထားတဲ႔ ၇ရက္သားသမီး တစ္ပတ္စာ ( ၁၇-၆-၂၀၁၈ ) မွ ( ၂၃-၆-၂၀၁၈) အထိ ေဗဒင္ေဟာစာတမ္း
14.6.2018 မွ 20.6.2018 အထိ တစ္ပတ္စာ ၇ရက္သားသမီး ေဟာစာတမ္း
ဇင္ေယာ္နီ တစ္ပတ္အတြင္း ခ်ိန္ဆရန္ သင္၏ကံ (၂၀၁၈ ဇြန္လ ၁၁ မွ ၁၇)